अघोर बाबाले ज्योतिष अर्जुन क्षेत्रीलाई दिए यस्तो चेतावनी : जनतालाई आतंकित गर्ने काम बन्द नगरे भौतिक कारबाही (पुरा भिडियो) – PanchKhal Online
Home/भिडियो/अघोर बाबाले ज्योतिष अर्जुन क्षेत्रीलाई दिए यस्तो चेतावनी : जनतालाई आतंकित गर्ने काम बन्द नगरे भौतिक कारबाही (पुरा भिडियो)
अघोर बाबाले ज्योतिष अर्जुन क्षेत्रीलाई दिए यस्तो चेतावनी : जनतालाई आतंकित गर्ने काम बन्द नगरे भौतिक कारबाही (पुरा भिडियो)
1,697 1 minute read
काठमाडौँ । ज्योतीष अर्जुन क्षेत्रीलाई धेरैले हावाका कुरा गर्ने व्यक्तिका रुपमा हेर्ने गर्छन भने कतिले उनलाई भगवान नै मान्ने गरेका छन् । उनी धेरै बोल्छन् तर जे बोलेका छन् त्यो आजसम्म नपुगेको भने बिरलै होला ।
यतिबेला भने ज्योतीष अर्जुन एक अन्तर्वार्तामार्फत यहि जेठ २८ गते भित्रै ६ देखि ७ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाने खतरा देखाएका छन् । उनले भनेका छन्, नेपालगञ्ज, रुपन्देहिसहित दाङ जिल्लाकै आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प जाँदैछ सबै सजग भएर बस्नुहोला ।
अर्जुनले २०८० साल भित्रै तोकतन्त्र ढल्ने र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका नाति हृदयन्द्र शाह राजा बन्ने ठोकुवासमेत गरेका छन् । तपस्वी रामबहादुर बम्जनलाई लागेको आरोप पनि झुटो आरोप भन्दै उनले आक्रोषित हुँदै आफ्नो मनको भाव पोखेका छन् । उनले भनेका छन्, बम्जन एउटा धर्म अनुसायी हुन्, उनले बलात्कार गर्नै सक्दैनन् । यो कुरा तपाई हामिले त आजसम्म पुष्टि गर्न सकेका छैनौँ या त अर्जुनको ज्ञानले के देख्यो त्यो पनि हामि भन्न सक्दै ।
त्यसैले यो कुरा कतिको साँचो हो भन्ने समयले बताउँदै जानेछ हामि त्यसैमा विश्वास गरौँ । अर्जुजले अहिलेसम्म भनेका कुराहरु धेरै मिलेका छन् त्यसैले पनि उनी अहिले सर्वत्र चर्चामा रहेका त्योजीष बनेका छन् । अब यस अन्तवार्तामा भनेका कुरा भने कति मिल्न जान्छन् त्यो आउदा दिनले नै बताउला ।
अर्जुन क्षेत्रीको उक्त दावीलाई मृतुन्जय अघोर बाबाले भने खण्डन गरेका छन । जनतालाई आतंकित नबनाउन क्षेत्रीलाई आग्रह समेत गरेका छन । बिगत ३० वर्ष देखि अघोरीबाबा बनेका मृतुन्जय बाबासंग भूतप्रेत, किचकन्या र अन्य विषयमा कुराकानी गरिएको छ । काठमाडौँमा जन्मिए पनि उनि ५ वर्ष देखि अनाथ भएका थिए । त्यसपछि उनि आश्रमको साहारामा पुगेका थिए । त्यसपछि उनि बाजेको साहारामा भारत पुगेका थिए ।
उनि भारत गएर अघोरीबाबाको शरणमा पुगे । त्यसपछि सुरु भयो उनको अर्को जीवन । आज उनि ६१ वर्ष पुगी सके तर २० वर्षको हुदा देखि सिकेको अघोरबाबाको ध्यान अझै दिन रात जब्छन । बाबा बनेर एक्लै घाटमा बसेकै वर्षौ भैसक्यो ।
उनै अघोर बाबासंगको कुराकानी हेर्नुहोस :
हेर्नुहोस अत्भुत बालाक जस्लाई बुद्ध को बारेमा सबै थाहा छ …हरेक नेपाली ले एक पटक अवस्य हेर्नै पर्ने भिडियो । शेर गरौ
ज्योतिषी अर्जुन क्षेत्रीलाई कसले पिट्यो?अकस्मात मिडियामा आए,जेठको २९ गते देशमा यस्तो अनिष्ट हुदै!
डर होइन, जहाज उडाउन पाउँदा गर्वको महसुस हुन्छ” -पाइलट पेमा लामा (भिडियो सहित)
भिडियो हेर्नुहोस ! दाङमा फेटिईन १६ बर्षिय सुन्दरी माता, कसरी प्राप्त भयो यति ठुलो शक्ति !
पाँचथर काण्डको खुल्यो नयाँ रहस्य : घटनामा सात जना थिए ! भाईले फेरी खोले नया रहस्य ! (भिडियो)